Maxay yihiin ciidamada Danab ee Mareykanka u tababaray Soomaaliya? - Caasimada Online
Home Warar Maxay yihiin ciidamada Danab ee Mareykanka u tababaray Soomaaliya?
Maxay yihiin ciidamada Danab ee Mareykanka u tababaray Soomaaliya?
By Bashiir Maxamed Caato | BBC Somali
Ciidamada kale ee aan Danab ahayn ayuu sheegay inay wanaagsan tahay in siyaasadooda tababarka lagu daro tababar gaar ah oo lamid ah kan ay qaataan ciidanka Danab.
Cabdisalaam Guuleeed, oo horay usoo noqday taliye ku xigeenkii hey’adda nabadsugidda Soomaaliya ee NISA ayaa yiri: “Danab inkastoo ay ka mid yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, haddana waxaa aas aasay Mareykanka, gaar ahaan AFRICOM, ujeedka ugu weyn ee ay ka lahaayeen wuxuu ahaa difaacidda danahooda Iyo isku ilaalinta xarumaha ay Soomaaliya ka deggan yihiin.
Ciiidamo la mid ah Danab ayuu Mareykanka u dhisay dalalka Afrika ee ay ka jiraan kooxaha Islaamiyiinta sida Nigeria, Mali, Cameroon iyo kuwa kal,e balse Jeneraal Bariise oo horay usoo noqday taliye ku xigeenkii hore ee ciidamada militeriga ee Soomaaliya wuxuu sheegayaa in Mareykanka uu aaminsan yahay waxtarka ciidanka Danab.